KAOMININA IVATO : Mitohy ny fanampiana ireo olona sahirana · déliremadagascar
KAOMININA IVATO : Mitohy ny fanampiana ireo olona sahirana
Socio-eco	 20 avril 2020 R Nirina
Tsy mipetra amin’izao ny ben’ny tanàn’i Ivato. Nizara fanampiana ho an’ireo fianakaviana sahirana sy sokajin’olona tsy nampidi-bola nandritra ny fihibohana ny kaominin’Ivato tarihin’ny ben’ny tanàna Penjy Randrianarisoa. Miisa 300 mahery ireo nisitraka izao fanampiana izao. Anisan’izany ny mpampianatra Fram, mpitarika posiposy, mpanera taxibe, mpitarika kalesa…
Betsaka ireo nitaraina ho tsy nahazo tamin’ny vatsy tsinjo ka nanaovan’ny ben’ny tanàna ezaka manokana ho an’ireo tsy nahazo tamin’izany. Vary, voamaina, legioma, savony, sira, aro-vava no nozaraina tamin’izy ireo ny 19 Aprily 2020. Noho ny fihibohana dia mitaraina tsy mahalafo entana ireo tantsaha mpivarotra legumes. Noho izany notsimbinina manokana izy ireo ka ny entan’ ireto tantsaha ireto ihany no novidin’ny kaominina ka nozaraina amin’ireo olona sahirana.